Morookoon Waancaan CHAN ofumaaf hambifatte
Gareen dargaggoota Itoophiyaa milkaa'aa jira - Friday, 17 August 2018 20:25
Gootichi atileetiksiifi siyaasaa, Fayyisaa Leellisaa biyyatti deebi'uuf jedha - Friday, 17 August 2018 20:24
Naannoon Affaar misoomaan duubatti hafeera - Friday, 17 August 2018 20:16
Itoophiyaanota bara haaraatti gara biyyaa galaniif hir'ina gatii %25 taasifame - Friday, 17 August 2018 20:14
Bara haaraatti, daandii haaraa, rakkataafis abdii haaraa - Friday, 17 August 2018 20:13
Morookoon Waancaan CHAN ofumaaf hambifatte Featured
Abbaa waancaa CHAN kan ta'e garee Morookoo (Suurri intarneetii)
Finfinnee: Guyyoota 23n darbaniif magaaloota Morookootti adeemsifamaa kan ture walmorkiin waancaa kubbaa miilaa Afrikaa (CHAN) Dilbata darbe mo'atummaa qopheesittuu waancichaa Morookootiin xumurameera.
Morookoon waancaa 'CHAN' kana qopheessuuf carraa kan argatte duraan dursitee “nan qopheessa” jettee waadaa tan galette Sudaan “hindanda'u” jechuusheetiin, Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Afrikaa akka keessummeessitu waan heyyameefi.
Yeroo shanaffaaf kan adeemsifame walmorkii waancaa kubbaa miilaa 'CHAN' kanarratti biyyoonni 16 ramaddii afuritti qoodamuudhaan hirmaataniiru. Tapha waancaaf kan walargan ramaddii tokkoffaarraa Morookoo, ramaddii sadaffaarraa Naayijeeriyaadha.
Walmorkii adeemsifameettis Morookoon mo'achuudhaani abbaa waancaa CHAN kan taate. Morookoon shaampiyoonaa kan taate Mooritaaniyaa 4-0n, Giinii 3-1n mo'achuudhaan, Sudaan wajjiin 0-0n adda baate tapha walakkaa irboo maaheessaaf dabarteetu.
Walmorkiiwwan irboo maaheessaatti Naamiibiyaa 2-0n, tapha walakkaa maaheessaatti Liibiyaa 3-1n mo'achuudhaan tapha waancaaf yoo dhihaatu Naayijeeriyaa ammoo 4-0n gaggeessuudhaan waancaa ofuma isheef qopheessite hambifateetti.
Naayijeeriyaan gamasheetiin waancaaf kan dhihaatte Ruwaandaa wajjiin 0-0n adda baatee, Liibiyaa 1-0n, Ikuwaatoriyaal Giinii 3-1n, Angoolaa 2-1n, Sudaan 1-0n mo'achuudhaani.
Tapha sadarkaa sadaffaa argachuuf adeemsifameetti ammoo Sudaan Liibiyaa Riigooreedhaan 4-1n gaggeessuudhaan sadarkaa sadaffaa argachuun meedaaliyaa nahaasaa argateetti. Injifannoo Sudaan kanaaf galcha eegaan garichaa kubbaawwan rukutaman keessaa lama deebisuudhaan dandeettiisaa mul'iseera.
Shaampiyoonaa 'CHAN' kanatti walumaagalatti taphoonni 32 adeemsifamuudhaan galchoonni 58 kiyyoodhaan walarganiiru. Galchoota sagal galchuudhaan taphataan Morookoo Ayyoob Elkaabii galchaa beekamaa ta'uun yoo filamu taphataa beekamaa shaampiyoonichaas ta'uun badhaasa addaas argateera.
Torban kana/This_Week 7734
Guyyaa mara/All_Days 1817154